မကာအိုအမြစ် မကာအမြစ် HelpMEHemp
ပင်မစာမျက်နှာ ဖျော်ရည်ရောစပ် မကာအို Root Superfood Hemp ရောစပ်
မကာအို Root Superfood Hemp ရောစပ်
HelpMEHemp's® Maca Root Superfood Hemp Blend တွင်သန္ဓေတားဆေး၊ ပါဝင်သောအားနည်းမှု၊ စွမ်းအင်ချို့တဲ့မှုနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုများကိုသက်သာစေသည့်သဘာဝအရင်းခံ antioxidant macaa ပါ ၀ င်သည်။ Maca အမြစ်သည်ယောက်ျားရောမိန်းမများပါလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုတိုးပွားစေသည်။ ခန္ဓာကိုယ်မှရောဂါများကိုကျော်လွှားရန်လိုအပ်သည့်အဓိကဒြပ်စင်နှစ်ခုဖြစ်သော glutathione သည် sod (superoxide dismutase) နှင့် glutathione တို့၏အဆင့်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။
သွေးတိုးမှုအတွက်ငါတို့ပေါင်းထည့်သည် HelpMEHemp® အဆင့် ၃၃% Hemp Fiber နှင့်အတူ HelpMEHemp® အဆင့် ၃၃% maca အမြစ်နှင့်အတူ Hemp ပရိုတိန်း။ Maca အမြစ်တွင် antioxidants များများပါ ၀ င်မှုနှင့်အတူပရိုတိန်းနှင့်အမျှင်များတိုးများလာခြင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၏ရောင်ရမ်းခြင်းမှကာကွယ်ပေးခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်၏ကိုယ်ခံအားစနစ်များကိုအသစ်ပြုပြင်ခြင်း၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်တိုးတက်ခြင်းတို့အားဖြင့်အစွန်းရောက်ရောဂါ၏အကျိုးဆက်များကိုသက်သာစေသည်။
ယနေ့ HelpMEHemp ၏ Maca Root Superfood Hemp Blend ကိုဝယ်ပါ။ ထိုစွမ်းအင်အားလုံးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားနောက်မှကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ပါဝင်ပစ္စည်းများ: HelpMeHemp®အဆင့် ၃၃% Hemp Fiber နှင့်အတူ HelpMeHemp®အဆင့် ၃၃% ပီရူး Maca အမြစ်နှင့်အတူ Hemp ပရိုတိန်း။
အံ့သြဖို့ကောင်းတယ် !! ငါအမြဲတမ်းငါ့အကာလနှင့်အတူပြissuesနာများရှိခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤထုတ်ကုန်ကိုနေ့စဉ်စတင်သုံးစွဲသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အချိန်ကာလသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ပရိုတိန်းကိုနေ့စဉ်လှုပ်ခါစေခဲ့သည်။ တခါတရံတစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ်အထိဖြစ်သည်။
အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်အသေးစိတ်မရှင်းပြပဲစိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောပြproblemsနာများသည်ကျွန်ုပ်အားပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်အားနည်းခြင်းများကိုမကြာခဏမခံစားမိစေဘဲအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ရပ်မှကူးစက်ရောဂါများကိုဖြစ်ပွားစေသည်။ ငါအတိတ်ကာလကဆေးဝါးကုသမှုခံယူခဲ့ပြီးပြီ၊ အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုလုံးဝဖုတ်ကောင်လိုခံစားခဲ့ရတယ်။ ယောဂအသိုင်းအဝိုင်းမှတစ်ဆင့်ဤထုတ်ကုန်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးယခုတစ်လခန့်အသုံးပြုသည်။ အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည် !! အစပိုင်းမှာငါချောချောမွေ့မွေ့လမ်းကြောင်းကိုကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဆက်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်။ အဲဒီအစား, ငါပုံမှန်အားဖြင့်ငါ့နေ့စဉ်ဒိန်ချဉ်ပေါ်အမှုန့်တစ်ဇွန်း - ဖြန်းဖြန်းအနည်းငယ်ယိုသို့မဟုတ် granola ထည့်ပါ, ဒါမှမဟုတ်ငါ PB & J အသားညှပ်ပေါင်မုသို့ဇွန်း - အပြည့်ဖြန်းပါလိမ့်မယ်။ အမှုန့်အပေါ်အလွန်အကျွံပါဝါအရသာမရှိပါ, ဒါကြောင့်အလွန်ကောင်းစွာပေါင်းစပ်နှင့်အတူတတ်! အရေးအကြီးဆုံးကတော့, ငါအနည်းငယ်ပိုပြီးတက်ကြွခံစားရတယ်နှင့်ငါမကြာသေးမီကဤအလွန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏စိတ်အခြေအနေ၌ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြခြင်းနှင့်ဤသူကမှပံ့ပိုးနေသည်ခံစားချက်ရှိသည်သောငါ၏အစေ့စပ်ထားသူနှင့်အတူပင်နောက်နေခဲ့သည်ဟုရိုးရိုးသားသားပြောနိုင်!